Lending Circles छोरा bienvenidos एक मियामी!
lending8 मा जुन 15, 2014 द्वारा लिखित।
पत्ता लगाउनुहोस् कि MAF कसरी मियामीमा छालहरू बनाउँदैछ!
जोस, डानिएला, र म Lending Circles कार्यक्रम, मियामी ल्याउनको लागि एक होनहार नयाँ समुदायको भ्रमण गर्न प्रस्थान गरे! म यस दिनको लागि पर्खिरहेको थिए जबदेखि म MAF मा सामिल भएँ। अब दिन यहाँ थियो र यो सिनको डे मायोमा खसे! होटल जाने क्रममा मैले फ्ल्याग्लर स्ट्रीट तल लैजाने निर्णय गरे जुन मियामी समुदायको मुख्य धमनी मध्ये एक हो, व्यस्त सडक सानो हवानाको बीचबाट चल्छ र सीधा डाउनटाउन मियामीतिर जान्छ।
यस जीवन्त सडकले सैन फ्रान्सिस्कोको मिसन जिल्लाको मिसन जिल्लामा एमएएफको घरसँग धेरै समानताहरू साझेदारी गरेको देखेर म अचम्ममा परेन।
दुर्भाग्यवस एक समानता यो थियो कि यो चेक कैशिंग र payday लेन्डरहरूसँग पहेली थियो। यो हामी त्यहाँ किन थिए भनेर एक दृश्य अनुस्मारक थियो र यसले मलाई राम्रो अवसर प्रदान गर्‍यो कि हामीले सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका क्षेत्रका नाफारहित संस्थाहरूमा के अवसरहरू छन्। अर्को दिन प्रस्तुतीकरण गर्नको लागि मैले एम्पेड महसुस गरिनँ।
मियामीका सबै मानिसहरूले सिन्को डे मेयोको लागि तयारी गर्दै थिए, म Lending Circles ले कसरी समुदायहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने बारेमा प्रस्तुतीकरण दिन तयार भइरहेको थियो। हामी मियामी जेपी मोर्गन चेस मुख्यालयमा प्रवेश गरेका छौं, जब मानिसहरूले न्यानो मीमी सडकहरूको बन्द फिल्टर गर्न थाले। रोजा मेक्सिकोको मीठो बास्नाले कोठा भर्यो, जबकि मैले भन्नु पर्ने स्यान फ्रान्सिस्कोमा केहि अद्भुत मेक्सिकन खाना छ, म भन्नेछु कि यो नजिकै दोस्रो थियो।
सुरुमा सबैजना प्रविष्टि र नेटवर्कि withको साथमा MAF को Lending Circles को बारेमा सुन्न आएका व्यक्तिहरूको मात्रा न्याय गर्न गाह्रो थियो।
जब प्रस्तुति सुरू भयो, मैले याद गरे कि अरु धेरै मानिसहरू भित्र आएका थिए! प्रस्तुति समाप्त भएपछि व्यक्तिहरू कोठाको किनारमा अस्थिर थिए। यो सबैको उर्जा महसुस गर्न उत्साहजनक थियो र दर्शकहरूबाट आफैले सुनेका अवसरहरू सुन्नुहोस् जुन Lending Circles उनीहरूको स्थानीय समुदायको सेवा गरीरहेको थियो।
अर्को दिन मलाई एक स्थानीय गैर नाफामुखी क्याटालिस्टसँग साइट भ्रमण गर्न मन लाग्यो, जो एमएएफको साथ साझेदारीले उनीहरू र उनीहरूको समुदायका लागि के गर्न सक्दछन् भनेर सुन्न आएका थिए। तिनीहरू डेड काउन्टीमा एक नाफामुखी हुन् जसले परिवार र समुदायका सदस्यहरूलाई सफलताको दिशामा सुरू गर्न कूवाउन एक विविध संसाधनको रूपमा काम गर्दछ, एक साँचो उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक टोली (टेरी र ग्रेचेन) ले मलाई न्यानो स्वागत दिए र मलाई उनीहरूको साइटको राम्रो भ्रमण गरे। म मद्दत गर्न सक्दिन तर तिनीहरूको कलाको कार्यको प्रशंसा गर्न सक्छु, केहि धेरै व्यक्तिगत, केहि उनीहरूको आफ्नै सदस्यहरूले बनाएको हो, र पाठ्यक्रम केहि पूर्ण रूपमा अद्भुत।
समग्रमा यो एक अचम्मको अनुभव थियो। जेपी मोर्गन चेस टोली र सबै गैर-नाफामुखी समुदायहरूलाई भेट्न साँच्चै ठूलो खुशी भयो जुन उनीहरूको समुदायलाई परिवारका लागि उत्तम स्थान बनाउन कडा मेहनत गरिरहेका छन्।